Fadeexada Paltalk-ga iyo Dulmiga Walaasha Muslimada ah. - iftineducation.com
Fadeexada Paltalk-ga iyo Dulmiga Walaasha Muslimada ah.
aadan21 / February 3, 2012
iftineducation.com – Fadeexaddii internet ka: iyo sirta dumarka kala warla’ Waa sheeko musiibo ah Gabari ay oga sheekaynayso saaxibaddeed……….
Wallaahi waa Yaabka yaabkiisa Musiibo tii u waynayd dheh ……
Mar walba oo uu ninkaygu guriga ii soo galo si dagdag ah ayaan u damiyaa internetka taasoo uu qariibsaday lana yaabay, ma uusan iga shakisanayn laakiin wuxuu uun doonayay inuu arko waxaan ka samaynayo Internetka. Laga yaabee inuu dareemay masayr ka dib markuu i arkay anoo maalin ku jira Voice Chat “qof kula sheekaysanaya cod ahaa” isticmaalaya mikrafoon. Markaa ka dib ayuu bilaabay inuu i canaanto asoo leh internetku waa wax balaaran waxyaalo badanna laga faaiidaysan karo, maad ka baratid luuqadaha iyo sida loo sameeyo website anfacaya dadka ood iska daysid waxa maalaa yacniga ah ood waqtiga isaga dhuminaysid, ka dib waxaan isku dayey inaan ka faaiidaysto internetka mar danbana aanan galin chat roomka “Qolalka wada sheekaysiga” inaan la hadlayo walaalo iyo saaxiibo mooyee.
Mudadaas 6 bilood ah ayaa waxaan calaaqo wayn na dhex martay magacyo la soo toobal caaraystay “Nick Names” aanan garanayn inay niman yihiin iyo inay naago yihiin toona, qof walba oo chat ka ii soo gala si uu iila sheekaysto ayaan la sheekaysanayay xattaa anoo og inuu yahay nin waxaan la sheekaysanayo. Waxaan ka dalbanayay inay iga caawiyaan computerka wax badan ayaan ka bartay oo ku saabsan internetka.
Dadkaas mid ka mida ayaa calaaqadeennu aad u waynaatay sababtoo ah wuxuu xirfad wayn u lahaa internetka, mar walba waan la sheekaysanayay dhib walba oo iga soo waajahda computerkana asaan kula ordayay ilaa uu kulankeennii noqday mid yawmi ah oo maalin walba ah. Waxaan jeclaaday sheekadiisa iyo kaftankiisa xiriirkeennu inuu sii waynaado ayuu bilaabay maalinba maalinka ka dambaysa. Aniga iyo ninka lagu magacaabo ????? kuna naynaasan –hebal—arrin wayn wayn ayaa na dhex martay wuxuu igu kaday hadalkiisa malab ka ah erayadiisa jacaylka eed moodo inuu buug ka soo xafiday, laga yaabee in erayadiisu aad aysan u qurxoonayn laakiin shaydaan ayaa malab ii mariyay iiguna qurxiyay si xadka ka baxsan.
Waa ballannay asoo shaydaan sadex nagu yahay suuqyada waawayn mid ka mida dukaan kaas saacadaas daqiiqadaas. Wuu i arkay anna waan arkay “Shallaytadaydeen ma arkeenaa”!!!!!!!!!!!! wuxuu ahaa quruxloow aad u quruxbadan jirkiisa iyo dheerarkiisa dhan walba oo jirkiisa ahna waa i cajabisay muddu daqiiqad ka yar daqiiqadaas aan arkay waxaan dareemay inaanan arag ninka qurux badan intaan noolaa, ninkaygu ma foolxumayn mana gaabnayn manab buurnayn laakiin daqiiqadaas waxaan dareemay inaanan horay u arag nin ka qurux badan. Asna xaggiisa ma rumaysan inuu la sheekaysan jiray gabar sidayda u eg, wuxuuna ii cadeeyay inuu aragtidayda ku farxay quruxdaydana uuna rumaysan waayay inuu gabar saas u qurxoon mudadaas la sheekaysanayay, wuxuuna ii jeclaaday sidii wax waalan, wuxuu bilaabay inuu i yaraahdo waan is dilayaa haddaan ku waayo wuxuu kaloo oran jiray shallaydee waligay kuma arkeenaa wuxaan dareemay naagnimo waxaan bilaabay inaan qurux aanan horay isugu tuhmi jirin inaan isku tuhmo xattaa guurkayga ka hor.
Wuu dareemay inaan ku waashay wuxuuna gartay suu iiga faaiidaysan lahaa wuxuuna falkeeda galay suu maalin kale ii arki lahaa, maalin ma soo maro illaa wuxuu soo celiyaa dalabkiisii ahaa inaan ku arkaan doonayaa annaa aan diidayo anoo xujjo ka dhiganaya waa la i qabaa, asna uu leeyahay ee maxaan samaynaa?? Ma saas baan ku jirnaa illaa aan murugo u dhimanno?? Ma caqli gal baa inaan is jeclaanno aana awoodi kari wayno xattaa inaan isku soo dhawaannoo?? Qasab waa inuu xal jiraa aan ku kulmi karno si aan ugu wada noolaano hal saqafhoostii, wax uusan isku dayin lama arko anna wax walba aan ka diidayo illaa uu soo gaaray inuu ii soo bandhigo guur oon ninkaygana ka dalbado furriin si aan isu guursanno, haddaanan saas samyn inaan is dilo ama waasho ama aan ninkaaga dilo. Run aad ayaan u cabsaday….. laakiin waxbaa xaggiisa ii jiiday ina illowsiinayay ninkayga iyo caruurtaydaba waxaabad moodaa inay fikraddu i cajabisay, mar walbuu ila hadlo waan gariirayay ilkahana isku garaacayay waxaad moodaa in korkayga qabow lagu furay, aad ayaan u wareeray, waxaan dareemay inaan naftaydu ninkayga xabsi ugu jirto Jacaylkaan u hayyayna uu dhammaaday waxaan bilaabay inaan araggiisa iyo suu u egyahay aan naco, waan illaaway naftayda iyo caruurtaydaba waxaan ka shallaayay oo nacay guurkaygii iyo noloshayda waxaan dareemay kalinnimo sidii inaan kali ku ahay.
Markuu ogaaday oo hubsaday jacaylka aan u qabo waynankiisa iyo siduu ii hantay wuxuu ii soo bandhigay inaan mushkilo ninkayga ku furo siina wayneeyo mar walba illaa ii i furo arrinkaan horay ugama soo dhicin laakiin markaan maqlay waxaan dareemay inay tahay albaabka kaliye ee ii furan een oga bixi karo waxaan xabsi ahanta u dareemay ” waa la noolaashaha ninkayga”. Wuxuu ii ballan qaaday inuu i guursan doono ninkaygu markuu i furo ka dib inuuna farxad iyo nolol tan u wacan ku wada noolaan doono.
Ma ogtahay in ay jiraan barnaamijyo aad gashan kartid computerkaaga oo aad markaas ku ogaan kartid wax kasta oo computerka lagu qoro iyo website kasta oo lagu booqday, waa muhiim in aad barnaamijyadaas raadsatid si aad qoyskaaga ugu ilaalisid halista ka dhalan karta Internetka….
Saas ayay sheekadaydii ku bilaabatay inkastoo walwalkaygu uu sii badanayay saasoo tahay naftaydu waxay sii jeclaysanaysay marwalba inaan la sii joogo. Sheekadeennii waxay bilowday inay u waajahsato xagga romansiga Jacayl, ma garanayo inta saac oon isla joognay xattaa ma dareemin jidka aan hayno iyo meeshaan u soconno toona. Waxaan ku baraarugay anoo jooga meel aanan garanayn, mugdi ah una eg beer lagu nasto, waxaan bilaabay inaan ku qayliyo waa maxay meeshaan aan joogno?! Xaggeena ii wadaa??.. sakanno guduhood waa gaarigii oo istaagay iyo nin kale oo albaabka gaariga furaya iigana soo bixinaya gaariga si xoog ah…….waxaad moodaa wax walba inay sidii biriq u dhacayaa yacni dhaqsaha ……….. waan qayliyay …….. waana ooyay…….bal inaan wax i caawiya arko ……… waxaan gaaray inaanan maqlin waxay sheegayaan aanan fahminna, waxaan dareemay dharbaaxo wajiga la iiga dhuftay iyo qaylo la igu qaylinayo iyo ruxruxid la i ruxruxay illaa miyirkii iga tagay cabsida i haysay waynankeeda awgeed. Ma garanayo waxay igu sameeyeen iyo waxay ahaayeen iyo intay ahaayeen toona, laba ka mid ah ayaa uun arkay, wax walba sidii biriq ayay igu dhaafayeen waxaan ku baraarugay oo ku miyirsaday anoo dhabardhabar u jiiffa dharka intii badnaydna la iga siibay jiifana qol faaruq ah dharkaygiina la jeexjeexay waxaan bilaabay inaan qayliyo oon ooyo korkaygoo dhanna wuu wada wasakhaysnaa waxaana filayaa inaan isku kaadshay sakanno ka dib waaba asagii oo soo galay qoslayana.
Waxaan ku iri……….ilaahaybaan idinku dhaarshaye iska kay sii daaya inaan gurigaygii ku noqdaan doonayaaye.
Waxaa iga tanbata cabsidii waxaan dareemayay jirkayga oo gariiraya mana joojin oohin intaas uun baan ka xasuustaa wixii dhacay wax kalana ma xasuusto waxaa kaliya oon xasuustaa meeshii markuu iga soo qaaday ilaa uu guriga i keenay waxaa u dhaxaysay 4 saacadood indhuhuu iga xiray gaariga ayuuna i soo saaray wuxuuna igu tuuray meel u dhow gurigayga. Qofna ima arag anoo saas ah “qaawan” gurigaan si dagdag ah u galay, waxaana ku laabtay oohintaydii ilaa ay ilmadii iga dhammaatay ka dib ayaa waxaa ogaaday inay i kufsadeen dhiigna iga da’ayay waan rumaysan kari waayay waxa igu dhacay iyo waxaan naftayda gacmahayga ugu soo jiiday, waxaan maxbuus ku noqday qolkayga ma arag caruurtaydii mana cunteynin afkayga kama dagin waxba alla hoogayeey Jaxiimaan lugahayga ku raadsaday, saan ka dib muxuu xaalkaygu noqon doonaa naftaydaan nacay waxaana isku dayay inaan is dilo naftana iska qaado waxan ka baqayaa fadeexad iyo ninkaygu wuxuu i oran doono ha i waydiin caruurtay waxaan gaaray inaan garan joogitankoodana aan dareemin iyo waxa igu hareeraysan oo dhan xattaa markuu ninkaygii safarka ka soo noqday wuxuu dareemay is badalka wayn ee igu dhacay xaalkaygii aad ayuu u sii xumaaday illaa uu gaaray inuu isbitaal xoog igu geeyo.
Laakiin nasiib wanaag dhakhtarradiii ma ogaan wax igu dhacy waxey uun igu arkeen cunto xumo iyo dhiig la’aan. Waxaan ninkayga ka dalbaday inuu ehelkayga ii qaado sida ugu dagdagga badan aan ayaan u ooyay ehelkayguse aysan waxba ka ogayn waxa iga oohinaya, waxayse iska dhaadhiciyeen in aniga iyo ninkayga mushkilo na dhex taal, waxaa i soo gaartay inuu aabahay la hadlay ninkayga balse wax natiijo ah aysan oga soo bixin sababtooo ah ninkaygu xattaa waxba ma ogayn. Qof garanyo lama arko waxa igu dhacay oo ehelkayga ka mid ah ehelkayga waxay ii geeyeen nin quraan igu aqriya ayagoo u haysta in il ama jinn igu dhacay. Xaq uma lihi inaan ninkayga la sii noolaado, waxaana ka dalbaday furitaan markii hore anaa isla rabay furitaanka laakiin hadda asaan doonayaa inuu iga istareexo si uu gabar dhawrsan u guursado iyo anoo ixtiraamayaa caruurtayda aabahood. Xaq uma lihi inaan ku dhex noolaado dadka sharafta leh. Waxa igu dhacayoo dhan waa waxan labadayda gacmood ku sameeyo. Anigaa gacmahayga ku qotay qabrigayga. Saaxiibka chatroomkuna waxaa uun ahaa wiil ugaaranaya anna dabinkaan ugu dhacay. Qof walba oo sheekadayda ogaada wuxuu igu sifayn doonaa nacas ama caqli laawad waxaas iyo wax ka wayn ayaan xaqsadaa bal rajmi in dhagax la igu dilaan xaqsadaa…….. saasooy tahay waxaan tamanninayaa inaysan ku dhicin gabar muslimad ah waxa igu dhacay.
Waxaan rajaynayaa inuu ninkaygu iska kay cafiyo ceebtaan aan u soo jiiday xaq uma laha caruurtaydana waxaan ka rajaynayaa sidoo kale inay iska kay cafiyaan anaa sabab u ahaa sabab u ahaa sabab u ahaa sabab u ahaa ……….
Intaa ka dib waxaan dareemay inaysan noloshani ahmiyad saas u sii wayn lahan dhadhanna waligeed yeelanayn illaa daacada ilaahay iyo rasuulkiisa mooyee.Waxaa haray inaan iraahdo…………waa dhimatay saaxiibday usbuucyo ka dib ayey dhimatay sirteediina waa la dhimatay ninkeedii oon ogaan ayayna dhimatay,aniga oo kaliya ayey ii sheegtay anna inaad ku cibra qaadataan awgeed ayaan idiinku soo wariyay. ninkeediina ma furin waxaana ogaaday inuu aad oga murgay iyo inuu ka tagay shaqadiisii, uuna fariistay guriga si uu u koriyo caruurtiisa.
Engr:- Mohamed Abdinur Ahmed
Bachelor of Sceince in Software Engineering
Mogadishu University Postgraduate Program
Ragga Iyo Haweenka Aysan Marnaba Iloobin Cimrigooda?